သတင်းထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း | တရုတ်သတင်းများစက်ရုံ
ဘေးထွက် Gusset အိတ်
Kraft စက္ကူအိတ်များအနည်းငယ် options များ
19-04-25 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များအတွက်အထုပ်အိတ်ရွေးချယ်ရာတွင်ပါသလား? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျမွငျ့မားခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့ enviro အတူအမျိုးသားရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီအတွက် Kraft စက္ကူထုပ်ပိုးအိတ်လည်းဖြစ်စဉ်ကိုစက္ကူဇစ်အိတ်အဖြစ်လူသိများ Kraft စက္ကူ Self-ပိတျထားသောအိတ်၎င်း၏ Non-အဆိပ်သင့်, အရသာမရှိသော, ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့, သုံးသပျနိုငျ .. ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဆိုပါပေါင်းစပ်ထုပ်ပိုးအိတ်လက်ရှိထဲမှာပေါင်းစပ်ပြားအောက်ခြေထုပ်ပိုးအိတ်များအသုံးပြုမှုအတွက်နီးပါးသို့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်စျေးကွက်၏အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီလက်ရာမြောက်သောပြားအောက်ခြေထုပ်ပိုးအိတ်၏အားသာချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ? ငါတို့သည်သင်တို့အပြားအောက်ခြေ packin အကြောင်းကိုအောက်ပါအချက်များကိုပြောပြလိမ့်မယ် ...
သုံးဘက်အိတ်ကဘာကိုဆိုလို, အိတ်သုံးနှစ်ဖက်အတွက် welded ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းဘေးထွက်ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းပွင့်လင်းရှိနေပါဦးမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ဖောက်သည်များအိတ်မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထား, အဲဒီနောက်အိတ်၏အဖွင့်တံဆိပ်ခတ်ထားရန်ပိတျထားသောအပူကိုသုံးနိုင်သည်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးသုံးခုတဖက်သတ်အိတ်အဘို့လိုအပ် ...
အိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝများတွင်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်ထရပ်တယ်။ ကျနော်တို့ကော်ဖီ, အခွံမာသီး, သရေစာ, အမဲသား jery, ပရိုတိန်းပါဝါ, ဇစ်နှင့်အတူအိတ်တက်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းဖြင့်ထုပ်ပိုးမုန့်ညက်များကဲ့သို့အများအပြားအစားအစာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အိတ်ထရပ်မိတ်ဆက်ဤဆောင်းပါးကိုရေးပါ။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ကပစ္စည်းအကြောင်းပြောဆို။ ပထမဦးဆုံးအမျိုး pou ထရပ် Kraft ဖြစ်ပါတယ် ...
ဘေးထွက် gusset အိတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအများအပြား application များအတွက်လူကြိုက်များလျက်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့တာရှည်ခံပစ္စည်းလုံခြုံစွာတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖြစ်နေဆဲထုတ်ကုန်သေချာနေဖြင့်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝတိုးချဲ့ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြမ်း gusset အိတ်အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်, ထုပ်ပိုးမုန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအခွံမာသီးအဖြစ်အခြောက်အစားအစာများကိုအတွက်အသုံးပြုနေကြသည် ...
ကော်ဖီ bean ကိုနေ့စဉ်အသက်တာ၌တစ်ဘုံသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံကလာသောပင်ပန်း, အထူးလူတွေအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါကော်ဖီသောက်ရန်ကြိုက်တယ်။ ကော်ဖီအိတ်ကော်ဖီ bean ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထားရန်အသုံးပြုသည်။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့ကော်ဖီ bean ကိုထုပ်ပိုးမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာအရာ, ငါတို့ပစ္စည်းအကြောင်းပြောဆို။ နှစ်ခုပေါက်ဘော်ရှိပါတယ် ...
Adress: အခန်း 266, 2nd Floor, QingShuiWan, အမှတ် 7-1 TangKeng လမ်း, LongGang, Shenzhen, 518115, တရုတ်
မူပိုင်ခွင့်© 2019 All rights reserved ။
လမ်းညွှန် - အသားပေးထုတ်ကုန်များ- မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Clear ကိုပလတ်စတစ်အိတ် Up ကိုရပ် , အိတ်ထုပ်ပိုး Up ကိုရပ် , အိတ်အိတ် Up ကိုရပ် , ပလတ်စတစ်အိတ်ထုပ်ပိုး Up ကိုရပ် , Kraft စက္ကူ Resealable အိတ် , Clear ကို Pouch Up ကိုရပ် ,